Fihenam-bidy Big Apple ao amin'ny @KTuin | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Applelised | | Accessories, About us, Apple products
K-Tuin, rojom-teknolojia manan-danja manokana amin'ny vokatra Apple, mankalaza ny faha-roapolo taonany manomboka androany ary mandritra ny telo andro miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana amin'ny fitaovana sy ny vokatra paoma.
Raha mieritreritra ny hahazo ilay voalohany ianao Mac na iPad na hanavao ny maodelinao tamin'ny taona vitsy lasa izay na ny fitafianao ny vaovao iPad Air Amin'io fonony io no tadiavinao, angamba izao no fotoana mety satria ny fivarotana fivarotana K-Tuin Mankalaza ny faha-20 taonany androany izy miaraka amin'ireo fihenam-bidy mahatratra hatramin'ny 20%.
Fifanarahana ao amin'ny K-Tuin iPad Accessories
Tsy vao voalohany akory io K-Tuin Gaga anay amin'ny fihenam-bidy mahaliana. Mandritra farany Zoma Mainty Angamba izy no nanolotra tolotra tsara indrindra, satria afaka nilaza taminay tao amin'ny lahatsoratray Applelised manokana izahay. Ankehitriny dia mitovy ny tolotra.
Ireo mekanika voafidy tamin'ity fotoana ity dia mitovy amin'ny fampiroboroboana nataon'ny rojo frantsay FNac, fitambarana fihenam-bidy mivantana miaraka «Vola K-Tuin» azonao ampiasaina hampihenana ny vidin'ny vokatra hafa azonao any amin'ny magazay.
Azonao atao ny mahazo a MacBook Air avy amin'ny € 926 (ampitahaina amin'ny € 1.029 mahazatra), a iPad Air avy amin'ny € 455 (ampitahaina amin'ny € 479 mahazatra), a iPhone 5S amin'ny € 664 (ampitahaina amin'ny € 699 mahazatra) na a Apple TV amin'ny € 101. Izy ireo koa dia manana fihenam-bidy rehetra iPods ary koa kojakoja ho an'ny fitaovanao paoma.
1 Fanomezana bebe kokoa.
1.1 Fahagagana fanampiny ao amin'ny K-Tuin?
1.2 Angony ny fihenam-bidy azonao amin'ny tolotra K-Tuin.
2 Ahoana ny fomba hanararaotana ny fihenam-bidy Apple avy amin'ny K-Tuin.
Fanomezana bebe kokoa.
Ary raha tsy ampy izany, K-Tuin misy miaraka amin'ny fividianana izay Mac iPhone o iPad fividianana fanomezana maimaim-poana be dia be amin'ny sasany amin'ireto vokatra ireto:
Famandrihana ny Deezer Premium + 3 volana hankafizanao ny mozika tianao na aiza na aiza.
IPhone Starter Kit: tranga, mpiaro ny efijery, paty kely ary fonosana tariby.
Roa volana famandrihana Safidy Wuaki, hankafizanao sarimihetsika sy andian-tantara.
3-volana fisoratana anarana amin'ny Fitness ara-batana.
Fiantohana feno 6 volana.
Fahagagana fanampiny ao amin'ny K-Tuin?
Ary raha mbola kely ihany no manandrana an'izany rehetra izany, araka ny efa fantatsika K-Tuin Mety misy kojakoja fanampiny ho fanomezana tsy ampoizina izay ho hitanao rehefa manokatra ny fonosana novidinao ianao.
Angony ny fihenam-bidy azonao amin'ny tolotra K-Tuin.
Ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony ireo, raha profesora na mpianatra amin'ny oniversite ianao, amin'ny K-Tuin Azonao atao ny manampy ny fihenam-bidy amin'ny fanabeazana amin'ny tolotra teo aloha, ka ny vidin'ny a Mac hahagaga anao izany. Ary ambonin'izany, lasa miaraka amin'ny fanomezana bebe kokoa ianao.
Ahoana ny fomba hanararaotana ny fihenam-bidy Apple avy amin'ny K-Tuin.
Mba hahafahanao mankafy ireo fihenam-bidy sy fanomezana ireo dia manana fotoana fotsiny ianao mandra-pahatongan'ny alahady ho avy izao. Tadidio ihany koa fa ny fihenam-bidy sasany dia mihatra amin'ireo singa voafetra ihany (na dia malalaka aza io fetra io). Ho an'ity dia azonao atao ny mandeha any amin'ireo fivarotana ara-batana izay nozarain'i K-Tuin tao A Coruña, Alicante, Andorra, Barcelona, ​​Bilbao, Logroño, Madrid, Mallorca, Pamplona, ​​Santander, Salamanca, Valencia ary Zaragoza na amin'ny alalàn'ny ny pejin-tranonkala 24-ora ao amin'ny K-Tuin.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Fihenam-bidy Apple lehibe ao amin'ny @KTuin
Ho tonga ao amin'ny Mac App Store i WeChat anio